Iindaba-Into ekufuneka uyazi malunga nePaws yenja yakho
Into ekufuneka uyazi malunga neenyawo zenja yakho
Kukho amadlala okubila kwimilenze yenja yakho.
Izinja zivelisa ukubila kumalungu emizimba yazo engagutyungelwanga ngoboya, njengempumlo kunye neepads zeenyawo zazo. Umaleko wangaphakathi wesikhumba kwipuphu yenja uqukethe amadlala okubila-ukupholisa inja eshushu phantsi. Kwaye njengabantu, xa inja inovalo okanye ixinezelekile, iipads zazo zinokuba manzi.
Iipawuthi zepaw zipinki xa zizinjana
Iimpuphu zezinja zihlala zipinki xa zizalwa, Xa zikhula, ulusu lwangaphandle lweepawusi zalo luyaqina, iimpuphu ziya kutshintsha zibe mnyama. Ngokwesiqhelo, iinyawo zezinja zidibanisa iipinki kunye namabala amnyama xa zikwiinyanga ezintandathu ubudala. Oku kuthetha ukuba iipads zabo ziba nzima, ukuze bakwazi ukuhamba ngokukhululekileyo kwaye babaleke naphina.
Ukucheba Iikhonkwane zakhe
Ukuba iinzipho zenja ziyacofa xa zihamba okanye zirhabaxa ngokulula, kufuneka zisikwe. Izikhonkwane akufuneki zigqumelele umhlaba, ungathenga isikhonkwane senja yakho. Uninzi lweevets zinikezela ngale nkonzo ukuba umniniyo akayazi indlela yokwenza ngokwabo. Izinwele eziphakathi kweepawuthi zepads zenza ukuba matting ukuba kungachetywa rhoqo. Ungazidibanisa iinwele kwaye uzicole ukuze zilingane neepads. Khangela iingqalutye okanye enye inkunkuma ngelixa usika.
U-Licking okanye uhlafuneing iinyawo zabo
Ukuba inja yakho ikhotha iinyawo zayo, inokuba unesifo sokukruquka okanye ingxaki yokuziphatha enje ngexhala. ke uyayikhotha iphedi yakhe ukunciphisa imeko yakhe. Ukunciphisa isithukuthezi, zama ukuthatha inja yakho uhambe ngakumbi, ubaleke, okanye udlale nawe kunye nezinye izinja ukuze usebenzise amandla engqondo nawomzimba. Mnike iithoyi zentambo ezikhuselekileyo zokukhusela ukugxila kude kwiinyawo zakhe.
Iiphedi eziqhekekileyo okanye ezomileyo
Ukuba ulusu lwenja yakho luyoma, ingxaki eqhelekileyo kwimozulu ebandayo xa ukufudumeza okuphakathi kuthoba ukufuma ekhayeni, iipads zakhe zinokuqhekeka kwaye ziqhekeze. Zininzi izinto ezikhuselekileyo, ezentengiso ezikhoyo.